News Collection: किन फुल्यो बाराक ओबामाको कपाल ?
किन फुल्यो बाराक ओबामाको कपाल ?
विजय घिमिरे, लस एन्जलस, अमेरिका, साउन २९- सन् २००८ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा उठ्दा बाराक ओबामाको कपाल कालै थियो। अघिल्लो बिहीबार ५० औं जन्मदिन मनाउँदा उनको कपाल सेतै फुलेको देखियो। त्यसै दिन प्रथम महिला मिसेल ओबामाले मतदातालाई पठाएको इन्टरनेट सन्देशमा बाराकको फुलेको कपाललाई 'अमेरिकी जनताका निम्ति गरेको कडा मिहिनेतको प्रमाण' बताएकी छन्। ओबामा आफैं पनि भनेका छन्, 'जागिरले गर्दा मेरो कपाल अलिअलि फुल्यो, होइन भने म अझै तन्नेरी छु। मिसेलले भनेको कपाल फुले पनि म 'क्युट' देखिन्छु रे।'
ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्दा र कार्यकाल सकिएर निस्कँदा अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूका पनि कपाल फुलेको र अनुहारमा बुढ्यौली छाएको तस्बिर अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले देखाइरहेका छन्। रोनाल्ड रेगन, जर्ज बुस, बिल क्लिन्टन, जर्ज डब्लु बुसको पुरानो र पछिल्लो तस्बिरमा परिवर्तन प्रस्टै देखिन्छ। तस्बिर सार्वजनिक गर्ने सञ्चार माध्यमहरूले पनि यो परिवर्तनलाई 'कामको तनाव'सँग जोडेका छन्।
ओबामालाई राष्ट्रपति पद जित्न सजिलो भयो। अल्पसंख्यकबाट कमान्डर-इन-चिफ बनेर इतिहास बनाए उनले। तर, त्यसपछिका दिन चुनौतीपूर्ण रहे।
यसअघिका राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस पनि कार्यकालको अन्तिमतिर अलोकप्रिय भइसकेका थिए। त्यसबेला अमेरिका इराक र अफगानिस्तान युद्धमा होमिएको थियो। अमेरिकी सेनाले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाइरहेका थिए। तेलको मूल्य उच्च दरले बढेको थियो। उपभोक्ता बढी मूल्य तिर्नुपर्दा रिसाएका थिए। बेरोजगारी दर बढेको थियो। युद्धका कारण सरकारको सुरक्षा खर्च धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको थियो। अमेरिकी जनताले यसको सम्पूर्ण दोष बुसले सुरु गरेको इराक युद्धलाई दिइरहेका थिए। त्यसैबेला विश्व आर्थिक मन्दी सुरु भयो।
फलस्वरुप, बुसले प्रतिनिधित्व गर्ने रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवार जोन म्याकिनले चुनावमा ओबामालाई हराउन आफ्नै पार्टीका राष्ट्रपतिलाई सकेसम्म टाढा राख्ने प्रयास गरे। यति गर्दा पनि रिपब्लिकन पार्टीलाई अमेरिकी जनताले पत्याएनन्। 'परिवर्तन, हामी गर्न सक्छौं' भन्ने नाराका दिएका ओबामाले म्याकिनलाई सहजै चुनावमा हराए।
ओबामालाई राष्ट्रपति पदमा जिताउन परिवर्तन र रोजगारको चाहना गर्ने युवा वर्गले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। युवाहरूको आशा थियो, ओबामा आएपछि परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन भन्नाले उनीहरू अर्थतन्त्रले गति लिएको र रोजगारका अवसर बढेको हेर्न चाहन्थे। तर, ओबामाका लागि यो चाहना पूरा गर्नु फलामको च्युरा चपाउनुजस्तो भइरहेको छ।
ओबामा राष्ट्रपति हुँदा अमेरिकाको बेरोजगारी दर ७ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। अहिले ९ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ। यो दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि गए नराम्रो मानिन्छ। उनको कार्यकालमा प्रत्येक महिना सार्वजनिक हुने रोजगार तथ्यांकले ह्वाइट हाउसलाई प्रायः निरासै बनायो। अमेरिकामा बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लेका बेला एकजना मात्र राष्ट्रपतिमा पुनर्निर्वाचित भएको इतिहास छ। आउने केही महिनाभित्र रोजगार नबढे ओबामालाई दोस्रोपटक जित्न निकै कठिन हुने छ। उनको लोकप्रियता खस्कँदै जानुले यही देखाउँछ।
सिकागो सहरमा बिहीबार चुनाव प्रचारसँगै ५० औं जन्मदिन मनाइरहँदा अमेरिकी सेयर बजारले ओबामालाई निराशाजनक उपहार दियो। त्यही दिन सन् २००८ पछि अमेरिकाको मुख्य सेयर बजारमा एकै दिन ठूलो गिरावट आयो। यसले फेरि अर्को आर्थिक मन्दी आउँछ कि भन्ने त्रास लगानीकर्तामा बढेको छ। यो गिरावटले सन् २०११ का आर्थिक उपलब्धि ओझलमा परेका छन्।
उता तेलको उच्च मूल्य वृद्धि केही मत्थर भए पनि उपभोक्ताको गुनासो थामिएको छैन। यसबीच केही सातादेखि ओबामा अर्थतन्त्रका एकपछि अर्को मुद्दासँग जुधिरहेका छन्। सरकारले लिने ऋण सीमा निर्धारणमा प्रतिपक्षी पार्टीको ठूलो दबाब झेल्नुपर्‍यो उनले। विवाद बढ्दै जाँदा ओबामाले यो मुद्दालाई सही नेतृत्व दिएर लान नसकेको आरोप लाग्यो। अमेरिका ऋणमा डुबिरहेको छ। सबभन्दा ठूलो ऋणदाता चीन हो। एकातिर चीनले ऋण दिन्छ, अर्कातिर अमेरिका त्यही पैसाबाट चिनियाँ सामान आयात गर्छ। यो चक्र चल्न दिइरहनु वासिङटन र बेइजिङ दुवैको बाध्यता हो।
अमेरिकाले कतिसम्म ऋण बोकिरहने भन्ने विवादको विषय बनेको थियो। ठूलो तनावपछि दुई मुख्य राजनीतिक पार्टीबीच सहमति भएलगत्तै अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि दर अनुमानभन्दा निकै कम सुन्य दशमलव ३ प्रतिशतमात्र बढेको तथ्यांक आयो। त्यसको भोलिपल्टै बजारमा समान बिक्री घटेको अर्को निराशाजनक तथ्यांक पनि सार्वजनिक भयो। बेेरोजगार भएको दाबी गर्दै सरकारसँग भत्ता लिनेको संख्या पनि बढेको तथ्यांक आयो। दैनिक गुजाराका लागि अन्य उपाय नभएकाले सरकारबाट खाद्यान्न सहयोग (मासिक करिब २०० अमेरिकी डलर) लिनेको संख्या पनि बढेर ४ करोड ५० लाख पुगेको छ। सन् २००८ को मन्दीबाट अमेरिका मुक्त हुन नसकिरहेका बेला आएका यस्ता निराशाजनक तथ्यांकले आर्थिक संकट थप गहिरिने जोखिम बढेको छ। कतिपय अर्थशास्त्री यी तथ्यांकले अमेरिका आर्थिक मन्दीबाट नउम्किसकेको पुष्टि गर्ने बताउँछन्।
ओबामालाई अर्थतन्त्र ठिक स्थानमा ल्याउन नेतृत्व दिन नसकेको आरोप लगाइन्छ। अमेरिकासँग सही र दीर्घकालीन नीति नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सन् २००८ को मन्दी निस्तेज पार्न सरकारले लिएको ऋण सहयोग नीतिले काम नगरेको विश्लेषकहरू बताउँछन््। फेरि अर्को मन्दी सुरु भयो भने के नीति लिने यसको उत्तर वासिङटनसँग छैन। त्यही भएर यसअघि चुनाव जिताउन लागिपर्नेहरू पनि 'ओबामाले देशको अर्थतन्त्र उकास्न नेतृत्व दिन सकेनन्' भन्दै उनको कार्यकालको आलोचना गर्न थालेका छन्। १५ महिनापछिको राष्ट्रपति चुनावमा पुनर्निर्वाचित हुन ओबामाले मतदातालाई अर्थतन्त्र र रोजगारबारे केही न केही चित्त बुझाउनैपर्छ।
अमेरिकाका नम्बर एक शत्रु अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनमाथिको सफल कारबाही ओबामा राष्ट्रपति भएपछिको सबभन्दा उत्साहजनक खबर रह्यो, उनका मतदाताहरूका लागि। यो कारबाहीपछि अमेरिकाले आफूलाई संसारकै विश्वशक्तिका रूपमा फेरि एकपटक स्थापित गराएको थियो। त्यसपछि चुनावमा बाचा गरेजस्तै ओबामाले इराक र अफगानिस्तानवाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता गरे। तर, यी सकरात्मक पक्ष सरकारी ऋण विवाद र निराशाजनक आर्थिक तथ्यांकले ओझल परेका छन्। यसअघि निर्वाचनमा सघाएका आप्रवासी समूहहरू पनि ओबामाबाट पूर्ण सन्तुष्ट छैनन्। अध्यागमन कानुनहरूमा बाचा गरिएअनुसार सुधार नभएको उनीहरूको आरोप छ।
अमेरिकी जनता सबै क्षेत्रमा आफ्नो देश विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ। निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धि गरेर चीनले यसमा चुनौती दिइरहेको छ। चीनका सस्ता समानले अमेरिकी बजार खाएको छ। यहाँका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अमेरिकामा भन्दा चीन, भारतलगायत विश्वका अन्य देशमा काम गरेर पैसा कमाइरहेका छन्। योमात्र अमेरिकी जनताको सन्तोषको विषय हो। तर, यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने त्रास कायम छ। ओबामा राष्ट्रपति भएपछि पहिलोपटक गरेको चीन भ्रमण अमेरिकाको पक्षमा हुन सकेन भनेर आलोचना भएको थियो। चीनले आफ्नो मुद्रा युआनलाई कमजोर बनाएर अमेरिकी बजारबाट फाइदामात्र लिइरहेको वासिङटनको आरोप छ। तर, यसमा खासै परिवर्तन भएको छैन। चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न अमेरिकाले भारतसँग निकट सम्बन्ध बनाइरहेको छ। पाकिस्तानसँगको तनावपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध पनि ओबामा प्रशासनको अर्को टाउको दुखाइ हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यस्ता उतारचढाव, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, उच्च बेरोजगार दर राष्ट्रपति ओबामासामु तेर्सिएका चुनौती हुन्। यसलाई ठिक गर्ने नीति उनले अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन्। उनको लोकप्रियता घट्नुको कारण यही हो। र, चुनाव ताकाको कालै कपाल यति छिट्टै फुल्नुको कारण पनि यही हो।